Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Victoria oo Kulanki Bilaha ahaa isugu yimid
Jaaliyada Victoria oo Kulanki Bilaha ahaa isugu yimid
10 February 2013 Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria ayaa qabsaday shirkoodi Bilaha ahaa. shirkan ayaa waxaa gudoominayay Gudomiyaha Jaaliyada Halgame Xikam Sheekh. Gudoomiyaha ayaa ku mahad naqay dhamaan xubnaha shirka ka soqeyb galay kana warbixiyay waxqabadka Jaaliyada iyo halganka meeshuu marayo.
Waxaa halkaas wacdi Diini ah kasoo jeediyay Sheekh Fatxi oo halkaas ku dhiiri galiyay Jaaliyada in bulshada lagu dhiiri galiyo lana xasuusiyo Cabsida Allaah markasta oo meel la isugu yimaadana sidan oo kale loo joogteeyo is xasuusinta Cabsida Allaah.
Waxaa kaloo shirka ka hadlay Halgame Hasan Qubi oo asaguna kasoojeediyay taariikh kooban halganka Ogadenia. Shirkan oo waxqabadka Arrimaha bulshada lagu soo bandhigay ayaa waxaa xiiso badan lahaa waxqavadkii Ururka Dhalinta OYSU Meblbourne. Gudomiyaha ururka Dhalinta sidoo kale waxay ka warbixisay qaabka OYSU melbourne uga qeyb gali doonaan shirka guud ee OYSU oo ka dhici doona wadanka USA.
Shirkan ayaa gabagabadiisi waxaa laguda galay cilmi isweydaarsi iyo fikrado lagu horumarinayo Halganka.
Jaaliyada Soomaalida ee Victoria ayaa waxeey ka midtahay Jaaliyaadka ugu firfircoon Pacifica, isla markaasna u taagan habeen iyo maalin horumarka halganka.